Fanontana 3d, Masinina laser, sary sokitra 3d - Ecubmaker
Module miasa 4 azo ovaina
Haingam-pandeha haingam-pirinty & Fametrahana mazava tsara
Soraty daholo ny lamina, sary, endrika amin'ny fitaovana isan-karazany
Fanontana 3D misy loko roa
Tsy fako maloto sy tsy mifangaro loko
Sary sokitra CNC
Manorata, mihodina amin'ny fitaovana isan-karazany
Fanavaozana 8 hamaliana ny filanao tsy voafetra
Manana fiasa mialoha izay tadiavinao izahay
Sehatra maoderina hafanana efatra
Mandeha ho azy Leveling
Rindrambaiko fanaparitahana 4-in-1
180x180x180 Habe fanaovana pirinty
Inona no azon'ny mpanonta 3D TOYDIY 4-in-1 3D
Fampiasana bebe kokoa, safidy bebe kokoa hijerena
avy amin'i EcubMaker
nataon'i Edward Scott
nataon'i Mark Johnson
Tian'ny vondrom-piarahamonina misy mpampiasa 5000+
Rehefa avy namaky momba ny mpanonta pirinty hafa aho ary afaka mampiasa sasany, dia lazaiko amin'ny olona fa io no mpanonta 3D voalohany tsara indrindra azo raisina ary avy eo miakatra amin'ny mpanonta lehibe kokoa raha toa ka kely loatra ny habaka fananganana. Nampiasako izany ho an'ny tanjoko sy ny tiako manokana. ity milina ity be loatra.
Tsy antitra loatra aho vao hianatra zavatra vaovao!
Ny ToyDIY 4 amin'ny 1 miasa tsara!
Ny sandry GoPro mount dia somary marefo miaraka amin'ny fampidirana 15% ka nampiakariko hatramin'ny 50% ...
Nianarako ny niato kely ny pirinty ary nopetahana ilay raft ho toy ny fiantohana fiantohana ho an'ny dity fandriana.
Ny laser dia manafy ny tranoko izay nahatonga ny iPad hijoro.
Ity misy gadget kely vitsivitsy nomaniko sy navoakako: clip cordes extensions hitazona azy eo ambonin'ny radiator. Ny fitongilanana vaovao dia mijoro ho an'ny fitendriko. Ity takelaka mijery mampihomehy ity dia fanaintainan'ny hozatra sy fanalefahana ny fihenjanana, manotra teboka fanaintainana amin'ny zoron'ny lovia ianao.
Mila boaty elektrika boribory, pirinty iray fotsiny. Pirinty vita pirinty natao pirinty tamin'ny loko iray tamin'ny alàlan'ny fandefasana azy sy ny famoahana ny filamenta ilaina. Magnetic base dia mahafinaritra. Misaraka fotsiny ny zava-drehetra tsy misy ezaka.
Face Mask vonona! Faly nanao zavatra mahasoa amin'izao fotoana izao.
Ny programa laser vaovao dia manadio tsara kokoa sy madio kokoa! Misaotra anao amin'ny fandaharana nohatsaraina!
Fambolena Goldens Junkyard
Tonga haingana izy io ary nanao praseembeled. Tena mora ampiasaina ary ambonin'izany rehetra izany dia azafady indrindra mihena mieritreritra aho fa mety tsy hanana loha-mpanonta 3d tokana aho ary manantena aho fa misy fitaovam-pianarana lalina kokoa momba ny lafiny rindrambaiko. Nampiako ny hevitro manokana tao amin'ny YouTube ary araka ny ahitanao ny lohan'ny lazer manao asa mahafinaritra.
Mandrosoa !! Na dia ity aza ny 3D Printer ahy voalohany- tsy mbola sendra olana marobe hiasa amin'izany aho. Mandany ora maromaro vao hahalala momba ireo fiasa 4 tsirairay. Vita ny fanontana fanandramana rehetra omena amin'ny karatra SD. Ary amin'ny ankapobeny dia azoko lazaina fa mangina ny manaitra.
Alohan'ny handehanako amin'ny antsipiriany bebe kokoa dia tiako ny milaza fa- tsara ny tolotra mpanjifany. Nifandray tamin'izy ireo aho noho ny fisavoritahana nandritra ny fikosoham-bary. Ary mamaly ao anatin'ny fotoana fohy miaraka amin'ny antsipiriany mety izy ireo. Asa tsara izany!
Hatreto dia nandramako ny fanontana mahazatra ary an-tsasaky ny fanontana an-tsoratra 30 ora. Avy any amin'ny amazona ny mpanonta, ary feno tsara ilay izy. Tsy nisy zavatra simba rehefa nosokafako ilay boaty ary mora ny namaha azy. Nosaron-bozaka ilay zavatra mba hisorohana ny fivezivezena, ary ny fonosana rehetra dia nifono fonosana. Mora ihany koa ny nisokatra.
Herinandro vitsivitsy lasa izay, ny sakaiza malalako Molly dia namoy ny saka. Te-hanao fahatsiarovana kely ho azy aho ary nampiasa ny fiasa telo rehetra an'ny ToyDIY.
Afaka nampiasa an'ity mpanonta ity tamin'ny boaty tsy misy olana aho. Nividy an'ity tamin'ny volana febroary 2020 aho mba hampiasaina amin'ny tetikasan'ny sekoly. Tsy nahalala na inona na inona aho tamin'io fotoana io momba ny fanontana 3D, fametahana laser na sokitra CNC.
Nanana olana iray volana iray teo ho eo aho niaraka tamin'ny lohan'ny pirinty 3D ary nalefa haingana haingana aho.
Haingana ny orinasa mamaly ny fanontaniana sy ny olana mandritra ny andro fiasana ao Shina, noho izany dia misy fahatarana kely amin'ny fotoana famaliana. Saingy mamaly haingana izy ireo amin'ny fiheverana ny tsy fitovian'ny fotoana.
Mpanonta tena tsara! Hatreto dia nanao pirinty filamentana tokana ihany, fa toy ny horonantsary ihany, entao ny rakitra ary kitiho ny bokotra. Manaraka izany dia hiezaka ny laser aho.
Te hanana mpanonta 3-in-1 foana aho (miaraka amin'ny fanontana FDM, sokitra CNC, ary sokitra laser) fa ny ankamaroan'ireo masinina ireo dia lafo be. Ka rehefa nahita mpanonta 4-in-1 aho izay mora vidy kokoa noho ny hafa dia nanapa-kevitra ny hitady izany aho ary hijery izay eritreretiko momba ilay masinina. Ary faly amin'ny fividianako aho.
Ny Ecubmaker 4-in-1 Printer dia tonga tsara fonosana. Misy boaty kely marobe misy marika misy ao anatiny ao amin'ilay boaty lehibe- ao anatin'ireto boaty ireto dia ahitanao ireo lohan'ny fitaovana 4, ny filamenta, ny mpihazona filamentana ary ireo fitaovana / faritra. Ao anatin'ny boaty lehibe dia azonao atao ny mahita ny vatan'ny mpanonta, efa tafangona. Ity mpanonta printy ity dia mitaky fivoriambe kely indrindra- ny hany sisa ataonao dia ny mametraka ny lohan'ny fitaovana ilaina ary manomboka manonta! Alohan'ny hampiasana ny mpanonta dia te-hijery lalina ny mpanonta aho ary ny firafiny.
Ny fampiasana an'io milina io dia betsaka. Izany no antony itiavako ny 3DPrinter. Tsy mila miahiahy momba ny fiasa 4 ananany intsony aho. Ary ny kalitaon'ireo fiasa ireo dia tena tsara tokoa.
Ny fiasa manaparitaka ny fiara dia manampy ahy tsy hanana olana amin'ny fanontana. Tsy nafana mihitsy ilay sehatra noho ny haitao mitroka hafanana. Azoko atao ny mamoaka ny 3D Pirintiko mora foana rehefa avy nahavita azy.
Ary zavatra iray hafa manan-danja ihany koa ny, tsy mila mivory, ny milina alohany. Amin'izao fotoana izao dia vitsy ny masinina manome an'ity karazana rafitra ity.
Ny rindrambaiko amin'ny famolavolana azy dia manome, ary tena manan-karena amin'ny atiny. Azoko atao ny manitsy na mamolavola ny maodeliko amin'ny rindrambaiko ecubware.
Hanoro hevitra ny tsirairay aho mba hividy an'ity milina ity, satria mora be izy io amin'ny fampitahanao amin'ireo endri-javatra mialoha sy fiasa mialoha.
Niasa tsara! Tonga tsara daholo ny zavatra vita doka. Hatreto dia nahavita ny sokitra tamin'ny laser indrindra ary tena tiany ny vokatr'ity milina kely ity. Nitondra filamentana avana aho alohan'ny nanaterana ny mpanonta. Sambany nampiasaina vokatra tsara ny fampiasana. Manantena aho fa betsaka ny zavatra ho hita sy hianarana.
Mitady mpanonta 3d hividianana ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny zanako lahy. Makà andro maromaro hanapahana hevitra ary farany hitondra ity 4in1 ity. Tena mendrika izany! Niasa tapa-bolana mba hanandrana hanonta pirinty 3d sy laser sasany amin'ny valizy hazo. Hitako fa tena mahaliana ny fampiasana ny laser, na dia nafindra tany amin'ny garazako aza ny mpanonta ahy ho fiarovana fanampiny!
Vita ny tetik'asa voalohany niaraka tamiko tamin'ny Toydiy 4in1. Nanonta ampahany maromaro ary niara-niangona. Na dia nisy aza ny fikasana tsy fahombiazana noho ny olan'ny toe-javatra, saingy aorian'ny resaka kely miaraka amin'ny fanohanana dia namboarina izy io. Amin'ny ankapobeny tiako ity mpanonta ity.
Nandeha sambo ny Ecubmaker mba hanatanterahana ny nofin'ny Mpanamboatra. Amin'ny maha iray amin'ireo orinasa voalohany handroso hampandroso ny Multi-functional 3D Printer, EcubMaker nidera ny fanavaozana sy ny kalitao manara-penitra.
Hatramin'ny nananganana anay tamin'ny taona 2013, dia mamorona andiana mpanonta printy 3D avo lenta marobe toa ny Fantasy izahay. Taorian'ny nahazoana fahombiazana tamin'ny andian-dahatsoratra Fantasy, ny tanjonay manaraka dia ny hampivelatra zavatra iray afaka mahafeno ny filan'ireo mpamorona izay tia manana milina afaka manao asa maro. Ary koa izay afaka mamonjy vola sy fotoana hanovana ny masinina amin'ny milina. Farany, nahatratra ny tanjonay izahay. Amin'ny taona 2019 izahay dia mandefa Printer 3D 4-in-1 voalohany voalohany manerantany antsoina hoe: TOYDIY 4-in-1. Izay nahitana loko tokana FDM, loko fanontana 3D roa an'ny FDM, sokitra tamin'ny laser, sary sokitra CNC miaraka amina endrika matihanina hafa.
Manana mpikambana 10 mahery ao amin'ny ekipa R&D izahay. Izy rehetra dia manohy ny nofinofy hanavao zavatra ho an'ny mpanjifa tsotra ka hatramin'ny mpanjifa tsotra. Tapa-kevitra izy ireo ny hanao zavatra izay azon'ny mpianatry ny oniversite ampiasaina. ray aman-dreny antonony na fialamboly efa misotro ronono aza. TOYDIY 4-in-1 no ohatra tonga lafatra hanaporofoana ny fandavan-tenany. Fanamby lehibe ho azy ireo ny fampandrosoana ny rindrambaiko matihanina rehetra. Rehefa avy nandalo dingana sarotra izahay dia nanao izany. Amin'izao fotoana izao TOYDIY dia fanontana 3D fitaovana marobe nohavaozina izay mandresy am-pitiavana olona tia teknolojia.
Hanohy an'ity fandraisana anjara ity amin'ny indostrian'ny fanontana 3D sy ny fandrosoany dia ampanantenaina isika fa hanome ny zato isan-jato. Miasa izahay mba hanamora ny fiainana ny mpampiasa. Tianay ianao hiaraka aminay ary ho iray aminay mino ny fanavaozana sy ny fanovana ho an'ny zanak'olombelona.
Patanty sy zon'ny mpamorona